Iindawo ezi-5 eziPhezulu zeBhola yeBhola yeBhola ekhatywayo
Ngu-Kacey Kroh, u-Abshier House, u-Abshier House
1 6 Emva
Ukuba ukhangela indlela yokuncokola ngokuxoxa ungakhange ujonge phambili Imidlalo ye-CBS , Esibonelela ngokuncokola simahla phakathi kwamalungu eligi ukuze ukwazi ukuthetha intshaba yakho kwiintsuku zomdlalo! Eli nqaku lenza ukuba iligi isebenzisane ngakumbi nabadlali abafuna umdlalo omnandi.
Mbini 6 Emva
Ibhola yeBhasikithi emnandi ye-ESPN
Umthombo: espn.go nekulu
Ukuba ujonga olona phawu luchanekileyo kwaye luhlaziyiweyo, ke Ibhola yeBhasikithi emnandi ye-ESPN yindawo yakho. I-ESPN ibonelela ngeetreyiki zokufumana amanqaku kwiwebhusayithi yabo ngelixa ukonwabela umdlalo kwiscreen sakho esikhulu. Ungabalandela abadlali bakho ngokusondeleyo ngaphandle kokufaka iitshaneli ngexesha lentengiso okanye usebenzisa i-PIP eyoyikekayo (umfanekiso-kumfanekiso) kumabonwakude.
3 6 Emva
Umthombo: nba nekulu
Ukuba ukufuna kwakho ukuba yinxalenye yefomathi esemgangathweni yefant basketball esemthethweni, emva koko NBA.com lolona khetho lukhethileyo. Kuba iNBA.com yindawo esemthethweni yoMbutho weSizwe weBhola yeBhola ekhatywayo (i-NBA), kukho ulwazi olunzulu ngakumbi olufumanekayo kubadlali, izibalo, iintsuku zomdlalo, kunye neshedyuli kamabonwakude kunokuba inikezelwe kuyo nayiphi na indawo yebhasikithi yefantasy.
I-NBA.com ithatha ukuba ungumlandeli onzima kwaye ayizukubonelela ngamaphepha okopela, nangona kunjalo, zilungiselele ukuthatha ixesha lokuzenzela elakho.
5 6 Emva
IRotoworld, ixhaswa yiNBC Sports
Umthombo: mqengqube nekulu
Ukuba ufuna iligi yesiko, emva koko Rotoworld ukubheja kwakho okuhle. Iwebsite inikezela naluphi na uhlobo kwifomathi yomdlalo onokucinga ngayo. Unokukhetha imihla ngemihla, ngeveki, kunye neeligi ezizeleyo. Unokukhetha nokuba bangaphi abadlali abakoluhlu lweqela ngalinye kunye nokuba mangaphi amahlelo omgangatho owafumanayo. Le yindawo ye-leaguers engayonwabisiyo ifomathi esemgangathweni.
Gcina ukhumbula ukuba le ndawo ayisiSimahla! ($ 14.99 USD ngexesha lokupasa.)
6 6 Emva
Umthombo: Yahoo nekulu
Ukuba ujonga iwebhusayithi ye-basketball emnandi egcwele iividiyo kunye nazo zonke iintlobo zezinto ezibonakalayo, emva koko Imidlalo ye-Yahoo yindawo ekufanele ukuba ibe kuyo. Ayisiyiyo kuphela le ndawo yoqobo xa kuziwa kwimidlalo yezemidlalo emnandi, kodwa neMidlalo ye-Yahoo ikwabonelela ngeeligi zasimahla, amagqabantshintshi, kunye nokubuyiswa kwangoko kunye nokuhamba ngokulula kumaphepha eligi.
optixcare iliso lube plus
Eyona ndlela yokucoca isikrini se-ipad
ipilisi kunye nam kuyo
iziphumo ebezingalindelekanga zefolic acid
I-adderall xr coupon yeentsuku ezingama-30 zetyala
indlela elula yokulinganisa umhlaba